पैसा कमाउन जीवजन्तु नमारौं :: Setopati
आयुष्मा पाण्डे असोज १०
अहिले विश्‍वमा जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो बढ्दो जनसंख्याको कारणले मानिसहरुले जङ्गलमा गएर त्यहाँका बोटबिरुवा काटेर आफू बस्नको लागि घर बनाइरहेका छन्। उनीहरु पैसा कमाउनका लागि अनेक जीवजन्तुहरुलाई मारिरहेका छन्। तिनीहरुले बाघको छाला, हात्तीको दाँत, गैँडाको खाग जस्ता मूल्यवान् वस्तुहरु बेचेर पैसा कमाइ राखेका छन्।
के जीवजन्तुको प्राण लिनु एक प्रकारको अपराध होइन र? हो, यो एक प्रकारको अपराध नै हो। नेपालमा त झन यसलाई कानूनन अपराधको रुपमा मानिएको छ। जीवजन्तुहरुलाई मार्ने मानिसलाई जेल पनि हुन सक्छ। मैले यो भन्दिनँ कि आफ्नो परिवारको पेट पाल्नको लागि पैसा कमाउनु हुँदैन। मैले यो भन्छु कि पैसा कमाउनको लागि जीवजन्तु मार्नु हुँदैन।
मानिसहरुले आफू बस्नको लागि बोटबिरुवा काटेर आफ्नो घर बनाउँछन् तर उनीहरुलाई यो थाहा हुँदैन कि त्यही बोटबिरुवाले गर्दा हामी आफ्नो जीवन जीउन सफल भइरहेका छौं। बोटबिरुवाहरुले त हामीलाई चाहिने अक्सिजन प्रदान गर्छ तर हामी मानिसहरुले त्यहीँ बोट बिरुवालाई काटिरहेका हुन्छौं। के यो पनि एक प्रकारको अपराध होइन र? हो, यो पनि एक प्रकारको अपराध नै हो।
यो अपराधलाई हामीले रोक्न त सक्दैनौं तर बिस्तारै बिस्तारै कम गर्न सक्छौं। यो अपराध कम गर्न हामीले आफूले सकेसम्म बोटिबिरुवा रोप्नु पर्छ। आफ्नो घरको वरिपरि हरियाली बनाउनुपर्छ। कुनै मानिसले रुख काट्न लागेको देखेभने उसलाई सचेत गर्नुपर्छ।
हामीले जीवजन्तु बचाउनै र बोटबिरुवा जोगाउने सन्देश अरुलाई दिनु पर्छ। आफ्नो जीवनमा बोटबिरुवाको के महत्व हुन्छ भनेर मानिसहरुलाई सम्झाउनुपर्छ। हामीले जीवजन्तुलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्‍नुपर्छ। कुनै मानिसलाई जीवजन्तुलाई हानी गर्न खोज्यो भने हामीले उसलाई सम्झाउनुपर्छ।
(आयुष्मा पाण्डे कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय, बुटवलमा कक्षा ६मा अध्ययनरत छिन्)